Kusiyanisa Inzwi | Kuverenga Nekudzidzisa
Zvirevo 8:4, 7
PFUPISO YECHIDZIDZO: Ita kuti zvauri kutaura zvijeke uye zvibate-bate vateereri vako kuburikidza nekukwidza kana kudzikisa inzwi rako, kurikoresa kana kuritetepesa, uye kukurumidza kana kunonoka kutaura.
Kwidza kana kuti dzikisa inzwi rako. Kwidza inzwi rako kuti usimbise pfungwa huru kana kuti ukurudzire vateereri. Itawo izvozvo paunenge uchiverenga mitongo iri muBhaibheri. Deredza inzwi kuti vateereri vave nechido chekunzwa zvawava kuda kutaura, kana kuti paunenge uchida kuratidza kutya kana kunetseka.
Usaramba uchingokwidza inzwi rako zvekuti vateereri vanonzwa sekuti vari kupopoterwa. Usazonyanya kuchinja inzwi zvekuti pfungwa dzevateereri dzinenge dzangova pamatauriro auri kuita.
Koresa kana kuti tetepesa inzwi rako. Kana zvichiita mumutauro wako, tetepesa inzwi rako kuti uratidze kuti une chido nezvauri kutaura, kana kuti uratidze kukura kwechinhu kana kureba kwedaro. Dzikisa inzwi rako kuti uratidze kusuruvara kana kunetseka.
Kurumidza kana kuti nonoka kutaura. Taura uchikurumidza paunenge uchitaura zvinhu zvinonakidza. Taura uchinonokera paunenge uchitaura pfungwa dzinokosha.
Usangoerekana wachinja inzwi rako zvekuti vateereri vanoshamisika kana kuvhunduka. Usanyanya kukurumidza kutaura zvekuti vanhu vanotadza kunzwa mashoko ako.
Ungasiyanisa sei inzwi rako kuti zvauri kutaura zvijeke uye zvibate-bate vateereri?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kusiyanisa Inzwi
Kuverenga Nekudzidzisa—Kusiyanisa Inzwi
th chidzidzo 10 p. 13